२२ बैशाख २०७७ इसीमाना सम्वाददाता 498 पटक पढिएको
बीरगंज २२ बैशाख
लकडाउनको अवधीमा दैनीक उपभोग्य सामाग्रीको आपूर्तीमा भूमिका निर्वाह गरेका खुद्रा ब्यवसायीहरुले आफूहरु मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन ।
उनीहरुले अनुगमनको नाममा आफूहरुमाथि ज्यादती भएको भन्दै अनियमितताको मुख्य ठाउमा कारवाही गर्न स्थानीय प्रशासनसंग माँग गरेका छन ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उत्पादनका थोक बिक्रेताले मात्र भ्याटबिल दिने गरेको खुद्रा ब्यवसायीको भनाई छ । ति कम्पनीको उत्पादन किन्दा मात्र जती रकम तिरेको त्यतीनै रकमको बिल पाउने गरिएको ब्यवसायीको भनाई छ ।
तर नेपाली उत्पादन र त्यसका थोक बिक्रेताले लिएको रकम भन्दा कमको मात्र बिल दिने गरेका छन । त्यसमध्य कतिपयले बिल समेत नदिई सादा कागजमा बिवरण लेखेर दिने गरेका छन ।
रातो खुर्सानीको खुद्रा बिक्री मूल्य तीन सय देखी तीन सय चालीस रुपैया रहेको छ । तर खुर्सानीको आफूर्ती गर्ने थोक बिक्रेताले भ्याट बिल एक सय रुपैयाको दिने गरेका छन ।
यस्तोमा अनुगमन समितिले खरिद मूल्य हेर्ने र खुद्रा ब्यवसायीले बेच्ने मूल्यका वीच सैयौ गुणाको अन्तर हुने हुदा खुद्रा ब्यवसायी कारवाहीको निशानामा पर्ने गरेको एक ब्यवसायीले बताए । खुर्सानीकै थोक बिक्रेताले पछि जो पायो त्यसको नाममा बिल भ्याट काटेर फाल्ने र हिसाव मिलाउने गर्दछन । यसलाई मिसम्याच भन्ने गरिन्छ ।
पास्ता ,पिठो र अन्य समाना किन्न गएका खुद्रा ब्यवसायीलाई पास्ता उत्पादन गर्ने कम्पनीले २५ हजारको समान दिदा भ्याट बिल चाही ६ हजारको मात्र दिएको छ । परिमाण ठिक देखाउने तर भ्याट बिल कमको दिने गर्दा अनुगमन समितिको तारो खाुद्रा ब्यवसायी बनेको उनीहरुको गुनासो छ ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रोडमा रहेका किराना पसलहरु सबै थोक बिक्रेता हुन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाकमै रहेको गोश्वारा रोडमा रहेका थोक बिक्रेताको पसलमा स्थानीय प्रशासनले कहिल्यै पनि अनुगमन नगरेको ति ब्यवसायीले बताए ।
स्थानीय प्रशासनले नचिनिएका कर्मचारीलाई खुद्रा बिक्रेता संगको समन्वयमा अप्रेशनको शैलीमा अनुगमन गर्नेहो भने मात्र उत्पादक, थोक बिmत्रेता र खुद्रा बिक्रेताका वीचको कालो बजारीको, बजारमाला छताछुल्ल हुन सक्छ ।
थोक बिक्रेताले खाने तेलको भ्याट बिल १ सय २५ रुपैया काटछन तर तेलको बिक्री खुद्रा बिक्रेतालाई २ सय १० रुपैयामा गर्छ । २ सय १० रुपैया लिएर १ सय २५ को भ्याट बिल दिनेले राजस्व कति अपचलन गर्छ ? उपभोक्तालाई कति मार पर्छ ? ।
पिठो लगायतका सबै सामानमा खुद्रा बिक्रेताले तिरेको पैसा भन्दा निकै कमको मात्र बिल पाउने गरेका छन । पुरा रकमको बिल माँग गर्दा सामान नदिने धम्की समेत थोक बिक्रेताले दिन्छन । बीरगंजको घण्टाघरको दक्षीणपट्टी पान गल्लीमा रहेका किराना पसलहरु पनि सबै थोक बिक्रेता हुन ।
नेपाली उत्पादनका मुख्य बितरकहरुले पनि रकम बराबरको बिल माग्नेहरुलाई अहिले सामान नदिने नीति लिएका छन । बजारमा यो खाले कार्टेलिङ गरेर कालोबजारीलाई संस्थागत गर्ने र राजस्व मार्ने काम प्रति स्थानीय प्रशासन र सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन आवश्यक भएको ति ब्यापारीको भनाई छ ।